jiri nziga email gote cadi iTune nke US na Nigeria - MyGiftCardSupply
Gote Onyinye Cadi iTune USA na Nigeria
I bi na Nigeria na-enwe nsogbu ichota ma o bu gote Onyinye Cadi iTune site na ebe atukwasara obi? I choro izuta egwuregwu na egwu ma choo ebe onu ahia ha di ala? Na shedi iTune nke USA, enwere egwuga na ihe egwuregwu adighi na shedi iTune nke Nigeria, oge ufodu, ha na adi oke onu!
Onyinye cadi iTune nke US ga-enyere gi aka mepee otutu ihe na olu ego di ala, ebe otutu ngwa ahia ka di olu ala na shedi iTune nke US karia ka o di na iTune nke Nigeria. Tinyere ichekwaba, I ga-enwe ike ichekwaba ihe ndi I gaghara inweta ma jiri ya gorie gi na ndi enyi gi na ndi ezinulo gi.
O bu site na otutu afo ire onyinye cadi iTune ka MyGiftCardSupply ji nwee oke aha na ebe ndi ahia ya nan di enyi ya no maka ha na-eziga cadi bu okpokopii nke oma ososo site na email. Site na ikwu ugwo nke PayPal, aga echekwaba ikwu ugwo gin a ihe nzuzo gi. I choo igote, ghoro onuego iTune nke ichoro, kpebie ma ichoro I gote otu ugboro ma o bu dirigaba, tuo aka na “Gote Ugbua”, ma lezie anya. Oge adighi anya, I ga-egolibe ihe di na shedi iTune nke United States.
ekeleoo! Ebidoro m website a n’afo 2012 iji nyere ndi mmadu ebighi na United States I gote egwu na ihe onyonyoo nke US nakwa ihe ndi ozo n’uzo di mfe. O bu ihe na-agum eri oge ikeputa uzo di mfe eji acho ihe n’igwe na uzo kacha mma esi eleta ndi ahia anya.
Anyi na-anabata ndi ahia site n’uwa niile, ya bu, golie atummatu anyi na Nigeria. O buru na inwere ajuju o bula, jiri ebe mkpoturu anyi I ga-ahu n’ala n’akuku aka nri ebe a kpoturu anyi. Ndewo maka itukwasa anyi obi di ka ebe nweta izizi gi n’ ihe gbasara inweta Onyinye cadi iTune nke US!
Ajuju maka Oninye cadi iTunes nke US
o ga-egbu oge izitere m cadi iTunes m site na Email?
I gote Onyinye cadi iTune site na MyGiftCardSupply di ososo ma dikwa mfe! C chago Onyinye cadi nile oku na igwe ma zipu ha site na email. A ga-ebinye aka ma zipu ngwahia nile o bere oge igochara ha.
O buru na I banye na account iTune gi, pia aka n’aha gi.
Site na ihe ga-aputa, ghoro “Gbaputa…”.
Pinye akara iri na isii site na onyunyo onyinye cadi ezigara na email gi ma pia Gbaputa. (I nwekwaziri ike jiri onyonyoo site na computa ma o bu ekwenti gi wellie ya elu ka oghara ide ihe.)
Ka I ga-esi gbaputa cadi gi site na akurungwa iOS:
Pia ihe ngosi ga na mgbedata ihu akwukwo ahu.
Hukwa na I banyego na account gi ma pia gbaputa.
Pia were onyonyoo seta ihe onyunyo na desktop gi. I nwere ike ighoro iji aka tinye akara gi ma pia rachighaa azu.
Anyi nwekaaziri uzo di mfe nwere foto I nwere ike iso ma I choo enyemaaka ozo.
Nke a bu Onyinye cadi iTune nke US, ya bu iga ahu na imepere account iTune nke US. A na-emepe accont iTune na obodo di iche iche, I ga-emepe account itune nke US.